Xukuumadda Somaliland Oo Loogu Baaqay Inay Siidayso Dad Ay Carruuri Ka Mid Yihiin Oo 13 Bilood Xukun La’aan Xidhan – somalilandtoday.com
Xukuumadda Somaliland Oo Loogu Baaqay Inay Siidayso Dad Ay Carruuri Ka Mid Yihiin Oo 13 Bilood Xukun La’aan Xidhan
(SLT-Hargeysa)-Xarunta Xuquuqal iinsaanka Somaliland ayaa Xukuumadda ugu baaqday in Xorriyaddooda loo soo celiyo dhallinyaro 13 bilood ka hor laga soo xidhay Gobolka Sanaag, kuwaasi oo muddada intaa leeg ku xidhnaa Xabsiga dhexe ee Magaalada Hargeysa, iyagoon Maxkamad la hor geynin.
War-saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Xuquuqal iinsaanka oo soo gaadhay Somalilandtoday ayaa u qornaa sidan “Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysa dawladda Somaliland inay joojiso xadhiga aan garsoorku jidayn ee gobolka Sanaag ka dhacaya
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysaa dawladda Somaliland inay xorriyadooda u soo celiso afar qof oo sifo sharci darro ah ugu xidhan mudo sanad ka badan iyada oo aan wax maxkamad ah la gayn.
Cabdilaahi Faarax Cabdilaahi, 13 jir, Jaamac Ibraahim Xasan, Maxamed Cabdilaahi Maxamed iyo Siciid Jaamac Ismaaciil, 16 jir, waxay booliska Somaliland ka soo xidheen deegaano ka tirsan degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, Julay 2018, iyaga oon haysan amar qabasho oo maxkamadeed.
Waxa soo qabqabtay ciidanka sida gaarka ah u tabo baran ee RRU da. Islamarkii la soo qabtayba waxa lagu soo wareejiyay xabsiga dhexe ee Hargeysa, oo boqolaal kiiloo mitir u jira guryohoodii iyo qoysaskoodii.
Mar qudha maxkamad lama hor gayn.
Sanadkii 2018 waxa isku dhac beeleed oo ka dhacay tuulada Ceeryaan ku dhintay saddex qof. Ciidanka RRU da ayaa la geeyey goobahaas. RRU da ayaa markaa soo xidhay afarta qof ee ilaa iminka xidhan. Qodobka 25aad ee Dastuurka Somaliland wuxuu sheegayaa “qofka xorriyadda looga qaaday fal-dembiyeed lagu eedeeyey awgeed, waxa uu xaq u Ieeyahay in lagu hor geeyo maxkamad 48 (siddeed iyo afartan) saacadood gudahood, laga bilaabo marka Ia qabtay.”
Afart qof ee July 2018 la xidhay maxkamad lama gayn. Wax eed ah laguma soo oogin. Mana jirto dacwad laga gudbiyay oo lagu haysto. Waxaay ku jireen xabsiga mudo saddex iyo toban bilood ah iyada oo aan eed lagu oogin, maxkamad la gayn, dembi lagu haystona loo sheegin. Sida ku cad qodobka 47(3) ee Xeerka Habka Ciqaabta qofka xidhan ka hor intaan dacwad lagu soo oogin waa in tobodii maalmood ee kasta hal mar la horgeeyo garsoore. Waxa cad in lagu gefay Xeerka Habka Ciqaabta ee Somaliland. In dad la iskaga hayo xabsi muddo aan cayinayn oo daba furan ah waa arin sharciga ka soo horjeedda.
Maaha masuuliyiinta dawladdu inay u adeegsadaan khilaafaadka beelaha inay ka dhigtaan marmarsiinyo ay dhinac iskaga riixaan dastuurka. Marka dagaaladu jiraan waa xilliga ku haboon ee la eego kalsoonida iyo awoodda hay’adaha dawladeed. Shaqada garsoorku maaha oo keliya xilliga nabadda, ee sidoo kale garsoorku waa inuu shaqadiisa guto xiliyada rabshaduhu jiraan.
Qodobka 9(1) ee Heshiiska Caalamiga ah ee Xuquuqaha Madaniga iyo kuwa Siyaasiga ah ayaa sheegaya “qofna si sharciga ka soo horjeedda ah looma xidhi karo, layskagamana hayn karo, qofna xoriyaddiisa lagagama xayuubin karo sifo sharciga ka baxsan.”
Xaruntu waxaay ugu baaqaysaa garsoorka Somaliland inay ilaaliyaan xorriyaadka dadka oo ay hubiyaan in dadka laga soo xidho gobolka Sanaag la horgeeyey garsoor…”
Dawladda Turkiga, ayaa waxay ka mid tahay Dawladaha Qunsuliyadaha ku leh Somaliland (SLT-Ankara)-Dowladda Turkiga ee uu...
Xog: Lacag Lagala Hadhay Mushaharka Shaqaalaha Dawladda Somaliland